को ढलान मा एक हातले डम्बबेलनेबुला जोर। विवरण र प्रदर्शन प्रविधी
को ढलान मा एक हातले जोर डम्बबेलनेबुला को व्यापक विकास को लागि एक प्रभावकारी शरीर निर्माण अभ्यास मानिन्छ व्यर्थमा छैन फिर्ता मांसपेशिहरु। यो धेरै प्रसिद्ध bodybuilders को प्रशिक्षण कार्यक्रम मा मौलिक छ।
व्यायाम यो समतल मांसपेशीमा जसद्वारा स्पिन खेलाडी को विशेषता वी आकारको छाँयामा प्राप्त तल, को आवश्यक मोटाइ दिन अनुमति दिन्छ। काम मा फराकिलोकालागि साथै एक हीरा र बेलनाकार प्रमुख मांसपेशी र triceps र बाइसेप को रियर टाउको समावेश गर्नुहोस्।
यसको कार्यान्वयनको जटिलता पनि प्रविधिको, विकास जो काम गर्न पर्याप्त लामो हुनेछ किनभने उच्च हुन मानिन्छ, र म सजिलो हुनेछ त्यसो गर्न भनेर भन्न पर्छ।
शरीर निर्माण मा, त्यहाँ विभिन्न छन् पछाडि लागि अभ्यास। को ढलान मा एक हातले जोर डम्बबेलनेबुला धेरै लाभ छ:
को ढलान मा परम्परागत thrust रड भन्दा गति को परिमाण ठूलो दायरा आदेश।
Mzhno को बोझ को सबैभन्दा भाग broadest मा पतन लागि त बाइसेप लगभग काम समावेश छ जो, एक प्रविधी चयन गर्नुहोस्।
न त एक ढलान मा एक हात thrust एक डम्बबेलनेबुला जस्तै, "ब्रेक" यो मांसपेशी समूहको रूपमा खेती गर्न सक्षम छैन।
को मेरुदण्ड मा लोड प्रदर्शन गर्दा फलाम को दंड अभ्यास भन्दा कम छ।
त्यहाँ लक्षित मांसपेशी को विस्तार मा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने मौका छ।
हामी कमीकमजोरी कुरा भने, बेल्ट गर्न डम्बबेलनेबुला पुल क्लासिक फलाम को दंड अभ्यास तुलनामा धेरै भएको ढलान मा एक हातले छैन। पहिले, अध्ययन को लागि समय दुई पटक पछाडि दुवै पक्षलाई आवश्यक छ। दोश्रो, यो एक धेरै कम वजन काम गर्न आवश्यक छ।
यो व्यायाम गर्न प्राप्त भएको ढलान मा एक हात thrust संग डम्बबेलनेबुला, यो चोट लागेको फिर्ता जोगिन गर्न प्रविधी गर्न कडाई पालन गर्न र लाभ विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण छ।
तिनीहरूले विभिन्न तरिकामा यसलाई के: दुवै खुट्टा संग भुइँमा खडा र अडान वा गोडा मा आफ्नो हात आराम; यस पीठ मा झुकेको खुट्टा र एक हात राख्दै। यो पीठ मा तेर्सो र अप्रत्यक्ष हुन सक्छ। प्रयोगले महिनामा फिर्ता तलामा समानान्तर वा पर्याप्त ठूलो कोण मा ढल्केको हुन सक्छ।
पहिलो मामला मा, लोड को एक महत्वपूर्ण भाग त्यो छ, यस्तो स्थितिमा रहेको, को खेलाडी संभव कुहिनो उठाउनु हुनेछ बाइसेप मा पतन हुनेछ, हात बल गर्न मुख्य रूप कारण छ।
को केसिङ को पीठ एक कोण मा आयोजित गरिएको छ भने, त्यसपछि कुहिनो को गति को आयाम निकै वृद्धि भएको छ, र उहाँले डम्बबेलनेबुला पुल गर्नेछ। तपाईंलाई थाहा रूप मा, कुहिनो को अपहरण स्थितिमा तिनीहरूले अधिकतम लोड प्राप्त गर्न सक्छन् latissimus मांसपेशीमा को मुख्य कार्य हो त्यसैले, र बाइसेप पूर्ण क्षमता मा काम गर्न।
naskamyu निम्नानुसार समर्थन एक हात को ढलान मा जोर dumbbells:
हत्केलामा को जांघ गर्न सामना भनेर आफ्नो दाहिने हात एक डम्बबेलनेबुला लिनुहोस्। बायाँ पीठ गर्न नजिकै खडा।
अगाडि बेन्ड र पीठ मा आफ्नो बायाँ गोडा र बायाँ हातमा दुबला, घुँडा अलिकति झुकेको सही खुट्टा, दायाँ काँध अलिकति कम, एक डम्बबेलनेबुला संग दायाँ-हात खुला, रचनाहरू गर्नुपर्छ आफ्नो सीधा फिर्ता, अगाडि हेर्न राख्नुहोस्।
एक गहिरो सास लिन र एकै समयमा लात्स् र पछिल्लो delts straining, अप डम्बबेलनेबुला पुल। सकेसम्म एक खोल टिप्न प्रयास गर्नुहोस्।
उच्चतम बिन्दु - को कमर मा एक डम्बबेलनेबुला - Linger गर्न, अधिकतम लात्स् straining।
बिस्तारै श्वास छोड्नुहोस् र jerks बिना सुरु स्थिति हात ल्याउन।
पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या इच्छित नम्बर बनाउन, हात परिवर्तन।
एक डम्बबेलनेबुला आफ्नो हात उठाउँदै, तपाईं छेउमा एउटा कुहिनो लिन सक्दैन। उहाँले अप सामना गर्नुपर्छ, र उच्चतम बिन्दु बस अधिकतम गर्न काम मांसपेशीमा कम गर्नेछ जो, एक स्पिन लागि यो गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
लागि आयाम र सबै भन्दा राम्रो परिणाम भन्दा मात्र होइन हात को आन्दोलन, तर पनि scapula बनाउन हुनुपर्छ। तल काँध हटाउदैँ, तपाईं फिर्ता को मांसपेशिहरु सुत्छन् गर्न, आफ्ना हात उठाउँदै, धेरै सकेसम्म सँगै काँध ब्लेड ल्याउन प्रयास, तिनीहरूलाई कम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।
सबै भन्दा राम्रो को लागि मांसपेशिहरु को stretching फिर्ता हात को डम्बबेलनेबुला फिर्ता लम्ब को पीठ गर्न डिप्लोय गर्न आन्दोलन को तल हुन सक्छ।
भारी गोले प्रयोग गर्दा, यो एक विशेष पट्टा, छैन मौका दिन हुनेछ पर्याप्त मा निरन्तर ध्यान केन्द्रित गर्न जो, र पाखुरा बाट लोड हटाउन लागू गर्न मनमोहक छ।
को ढलान मा एक हातले जोर डम्बबेलनेबुला फिर्ता मांसपेशिहरु को प्रशिक्षण को सुरुमा गरिन्छ।
महिला तीन दृष्टिकोण मा प्रत्येक हातले 10-15 पटक गर्न सिफारिस गरिएको हो। Projectile वजन -510 किलो देखि। मानिसहरू लागि, पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या संख्या र त्यस्तै दृष्टिकोण, को डम्बबेलनेबुला वजन - 10 15 किलो देखि।
Newcomers पहिलो हल्का वजन संग प्रविधी मास्टर पर्छ र बिस्तारै यो वृद्धि। उपकरण तोडने बिना 6-8 प्रतिनिधि गर्न सक्षम हुन रूपमा त खोल रोजेको हुनुपर्छ।
टेस्टोस्टेरोन बूस्टर: समीक्षा, मूल्यांकन। एक टेस्टोस्टेरोनको बूस्टर कसरी लिने?
पावरलिफ्ट मा विश्व च्याम्पियन - अन्ना Kurkurina। जीवनी, कोचिंग गतिविधिहरु, व्यक्तिगत जीवन खेलाडीहरूलाई
बढाउनुहोस्-पर्खाल मा: प्रयोग, प्रदर्शन प्रविधी, अन्य विकल्प व्यायाम
को सोभियत संघ मा सबै भन्दा ठूलो दुर्घटना: इतिहास, वर्णन, र तथ्याङ्क सूची। को सोभियत संघ मा एक विमान दुर्घटना बाँचे गर्ने एक महिला
कालीन बाथरूम शैली र एक विषयमा सुरक्षामा
हाइड्रोजन मा कार। कारहरुको लागि HHO-हाइड्रोजन बिजुली
एक सिंहावलोकन, वर्णन, प्रकार र समीक्षा: सडकमा लागि वास्तु प्रकाश
बिरालोहरु मा उपचर्म पैसाबारे: कसरी पाल्तु जनावर मदत गर्न?
डोनेट्स्क मा स्थायी वा अस्थायी काम
रूस र यसको सुविधाहरूमा जम्मा बीमा
गर्भवती र दुर्व्यवहार सिस्ट
एक लुगा धुने मेसिन छनौट